किन आकासियो नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ? «
किन आकासियो नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ?
प्रकाशित मिति : 14 August, 2019 7:32 am
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
मूल्य बढ्नुका कारण चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध, अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटाएको ब्याज र कमजोर सेयर बजार रहेका छन् । यस्तै जर्मनीको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तत, अमेरिकाको इरान र उत्तर कोरियासँग कटु सम्बन्ध र जम्मु–कश्मीर विवादलाईपनि सुनको भाउ बढ्नुको कारणमा लिईएको छ ।
यस्तै सुनको भाउ मंगलबार बढेर प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाली बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा भाउ १ हजार रुपैयाँले बढेर ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। मंगलबारको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च हो।
यसअघि सोमबार सुनको मूल्य ७० हजार रुपैयामा कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार मंगलबार तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला पनि १ हजार रुपैयाँले बढेर ७० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, चाँदी पनि प्रतितोला ८ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यता, भाउ निरन्तर बढेपछि बजारमा क्रेता ज्यादै न्यून देखिएका छन्। बिक्रेताको भने भीड लागेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाउ ६ वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। विश्व बजारमा सुन प्रतिआउन्स ०।६४५ १ हजार ५२६।८५ डलर सम्म पुगेको छ । यसअघि सन् २०१३ मा विश्व बजारमा सुन प्रतिआउन्स १ हजार ३८१.०७ डलरसम्म पुगेको थियो ।